Dagaalka Ilhan iyo Trump oo waji horleh yeeshay - BBC News Somali
Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twiterka kusoo qoray hadal ahaa"Waligeen ma hilmaami doono" iyo muuqaal tusinaya weeraradii September 2001 oo la barbar dhigay khudbadii Ilhan Cumar.
Kaddib markii la cambaareeyay bishii la soo dhaafay oo xitaa xisbigeeda dimoqaraadiga ah ay dhaliileen hadaladii kasoo yeeray, raaligelin ayay ka bixisay waxayna sheegtay "inay qaadatay dhaliiceynta casharna ay ka baratay ".
Khudbadeedii 9-kii bishan April ayaa dad badan soo jiidatay, kaddib markii uu baahiyay xildhibaan Texas ee ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, kaasi oo ku tilmaamay in hadalkeeda uu yahay " mid aan la qaadan karin".
Ronna McDaniel, oo ah madaxa Guddiga Qaran ee Jamhuuriga ayaa ku tilmaamay xildhibaan Ilhan inay tahay qof "kasoo horjeedo Mareykanka ".
Ms cumar ayaa arrintaasi uga jawaabtay iyada oo ku tilmaantay hadalada qaar "kuwa halis ah oo kicinaya dadka, taasi oo dhalisay halista isoo wajahayso" waxayna isbrarbardhig ku sameysay hadaladeeda iyo kuwii uu horey u yiri madaxweyne George Bush.